“Haddaan Hore U Idhi Xisbi Ayaan Leeyahay Maanta Waxaan Leeyahay Ma Lihi Xisbi Ee Waxaan Leeyahay ,” Gudoomiye Xigeenkii Hore Ee Kulmiye | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Dr. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Kadib markii uu ilaa April 2012, ku maqnaa dalka Britain oo xaalad caafimaad loo geeyay dhaawac kasoo gaadhay shirweynihii Kulmiye ee ugu danbeeyay. C/raxmaan oo kasoo
degay Madaarka Caalamiga ah ee Magaalada Hargeysa, waxa si weyn ugu soo dhoweey halkaa siyaasiyiin ka socday xisbiyada mucaaradka, Ururada siyaasada, madaxdhaqameed iyo boqolaal dadweynaha magaalada Hargeysa.
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee xisbiga KULMIYE Dr. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo la hadlay dadweynihii soo dhaweeyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sida loogu soo dhoweeyay dalkiisa, isagoo dareenkiisa ka hadlayana wuxuu yidhi, “Aad iyo aad ayaan dadkiinan faraha badan ee isoo dhaweeyay idiin salaamayaa. Runta markaan idiin sheego ma aan filayn in intan oo dad ahi inay isoo dhawaynayaan. Waxaan is lahaa dhawr qof oo asxaabtaadii ah ayaa kuugu imanaya madaarka, Walaalayaal wixii aan odhan lahaa idinka ayaa hore iyo imikaba u yidhi, oo ku tiiq-tiiqsaday oo gobol kasta iiga hiiliyay. Waxa la iiga hiiliyay Awdal, Togdheer, Hargeysa, Sool, Sanaag iyo Saaxil-ba waa la iiga hiilayay run ahaan, markaa waxa ii sharaf ah inay dadkiinan oo dhami igu soo dhoweeyaan dalkayga Hooyo” Ayuu yidhi.
Dr. C/raxmaan, wuxuu sheegay inuu dhawr sanadood ka hor rumaysnaa inaanu ahayn xaafad ee uu yahay Xisbi, balse ay taa wax iska bedeleen hada, wuxuuna isagoo isbedelkaa ku yimi sharaxaya yidhi, “Waxaan idiin sheegayaa sanadkii 2004- ayaan khudbad ka jeediyay Huteelkii Ming-sing ee Hargeysa, waxaan maalintaa idhi, Tol ma lihi ee xisbi baan leeyahay. Maanta waxaan leeyahay Xisbi ma lihi ee waxaan leeyahay Tol oo bulshadiinan isoo dhawaysay ayaa ii Tol ah. Bulshada Somaliland oo ah dad gob ah oo xaqdarada ka dagaalama ayaa aniga wax ii ah,”ayuu yidhi C/Raxmaan C/Qaadir.
Dr. C/qaadir wuxuu usoo jeediyay bulshada inay mar walba u hiiliyaan cadaaladda, kana dhiidhiyaan cadaalad –darrada, isagoo Ilaahay uga baryay inay shacbigu helaan siyaasiyiin daacad ah oo hoggaamiya.